Famaritana Meta: Ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra amin'ny SEO
Indraindray ireo mpivarotra dia tsy mahita ny ala amin'ny ala. Araka ny fikarohana Optimization Nahasarika ny sain'ny olona tato anatin'ny folo taona lasa, tsikaritro fa mpivarotra marobe no mifantoka be amin'ny laharana sy ny fifamoivoizana organika manaraka, manadino ny dingana tena izy izy ireo. Ny motera fikarohana dia manakiana tanteraka ny fahafahan'ny orinasam-pandraharahana hitarika ireo mpampiasa am-pikasana ny pejy ao amin'ny tranokalanao izay manome ny fikasana amin'ny vokatrao na serivisinao. Ary ny famaritana meta no fotoana anananao hampiakarana ny tahan'ny click-through azo avy amin'ny motera fikarohana ka hatrany amin'ny pejinao.
Inona no atao hoe Meta Description?
Ny motera fikarohana dia mamela ny tompona tranokala hanoratra famaritana momba ilay pejy nandady sy natolotra tamin'ny motera fikarohana izay asehony ao anatin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana (SERP). Ny motera fikarohana dia mazàna mampiasa ny tarehintsoratra 155 ka hatramin'ny 160 voalohany amin'ny famaritana meta anao ho an'ny valin'ny birao ary mety hitifitra hatramin'ny ~ 120 litera ho an'ireo mpampiasa motera finday. Ny famaritana Meta dia tsy hitan'ny olona iray mamaky ny pejinao, fa ny mpikomy fotsiny.
Ny famaritana meta dia ao amin'ny fizarana ao amin'ny HTML ary voaforona toy izao:
<meta anarana="famaritana" afa-po="Ny famoahana ny indostrian'ny Martech ho an'ny fikarohana, fikarohana ary fianarana ny fampiasana ny sehatra varotra sy marketing ary ny teknolojia hampivoarana ny orinasanao."/>
Ahoana ny fampiasana ny famaritana Meta amin'ny snippets?
Andeha hojerentsika izany amin'ny fomba fijery roa samy hafa… ny motera fikarohana sy ny mpampiasa fikarohana:
Ny motera fikarohana dia mahita ny pejinao, na avy amin'ny rohy ivelany, rohy anatiny, na ny sitemap anao satria mandady amin'ny tranonkala izy.
Ny motera fikarohana dia mandady ny pejinao, mijery ny lohateny, ny lohateny, ny fananan'ny haino aman-jery ary ny atiny, hamaritana ireo teny lakile mifandraika amin'ny atiny. Jereo fa tsy nasiako ny famaritana meta ato… ny motera fikarohana dia tsy voatery hampiditra ny lahatsoratra amin'ny famaritana meta rehefa manapa-kevitra ny amin'ny fanisana ny pejy.
Ny motera fikarohana dia mampihatra ny lohatenin'ny pejinao amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana (SERP) fidirana.
Raha nanome famaritana meta ianao, ny motera fikarohana dia mamoaka izany ho toy ny famaritana eo ambanin'ny fidirana SERP anao. Raha mbola tsy nanome famaritana meta ianao, ny motera fikarohana dia manondro ny valiny miaraka amina fehezan-teny roa heverin'izy ireo fa misy ifandraisany amin'ny atin'ny pejyo.
Ny motera fikarohana dia manapa-kevitra ny amin'ny laharam-pahamehana ny pejy miorina amin'ny maha-zava-dehibe ny tranokalanao amin'ilay lohahevitra sy ny isan'ny rohy mifandraika izay nalahatry ny tranokalanao na ny pejy ho an'ireo teny nomen'izy ireo anao.
Ny motera fikarohana mety manome anao laharana anao ihany koa raha miankina amin'ireo mpampiasa fikarohana na tsindrio ny valin'ny SERP na nijanona teo amin'ny tranokalanao na niverina tany amin'ny SERP.
Ny mpampiasa fikarohana dia mampiditra teny lakile na fanontaniana amin'ny motera fikarohana ary miantsona ao amin'ny SERP.
Ny valin'ny SERP dia natokana ho an'ny mpampiasa motera fikarohana mifototra amin'ny jeografia sy ny tantaram-pikarohany.
Ny mpampiasa fikarohana dia mizaha ny lohateny, ny URL ary ny famaritana (nalaina tamin'ny famaritana meta).
Ny teny lakile (s) ampiasain'ny motera fikarohana dia misongadina ao anatin'ny famaritana ny vokatry ny SERP.
Miorina amin'ny lohateny, URL ary ny famaritana, ny mpampiasa fikarohana dia manapa-kevitra raha tsindrio ny rohy na tsia.
Tonga eo amin'ny pejinao ny mpampiasa tsindrio ny rohinao.
Raha misy ifandraisany sy ifotoran'ny fikarohana notanterahin'izy ireo ilay pejy, dia mijanona eo amin'ilay pejy izy ireo, mahita ny vaovao ilainy, ary mety hiova fo mihitsy.
Raha tsy misy ifandraisany sy ifotoran'ny fikarohana natao izy ireo dia niverina tany amin'ny SERP izy ireo ary tsindrio pejy hafa… angamba ilay mpifaninana aminao.
Misy fiantraikany amin'ny laharana fikarohana ve ny famaritana Meta?
Fanontaniana feno entana izany! Google nanambara tamin'ny volana septambra 2009 fa ny famaritana meta na ny teny fanalahidy dia ny Google's algorithma laharana ho an'ny fikarohana amin'ny Internet… fa izany dia fanontaniana manokana manokana izay mila fifanakalozan-kevitra fanampiny. Na dia tsy manome anao ny laharana mivantana aza ireo teny sy teny lakile ao anatin'ny famaritana anao, dia misy fiatraikany amin'ny fihetsik'ireo mpampiasa motera fikarohana. Ary ny fihetsiky ny motera fikarohana dia manakiana tanteraka amin'ny laharan'ny pejinao noho ny valin'ny karoka azo ampiharina.
Ny tena izy dia, arakaraka ny habetsahan'ny olona manindry ny pejy anao no mampitombo ny mety hamakiany sy hizarany ilay pejy. Arakaraky ny hamakiany sy hizarany ny pejy no mahabe ny laharanao. Ka… na dia tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny filaharan'ny pejinao aza ny famaritana meta, dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fitondran-tenan'ny mpampiasa izany… izay laharam-pahamehana voalohany!
Ohatra Meta famaritana
Ity misy ohatra iray fikarohana, ho an'ny Martech:
Mampiseho an'ity ohatra ity aho satria raha nisy olona nitady "martech" fotsiny dia mety ho liana fotsiny izy ireo hoe inona ilay martech, fa tsy tena mianatra bebe kokoa momba azy io na mahita boky. Faly aho fa tonga eo amin'ny valiny ambony aho ary tsy dia manahy loatra fa ny fanatsarana ny famaritako ny meta dia mety hahita fahitana bebe kokoa.
Fanamarihana: Tsy manana pejy antsoina aho inona ny martech? Izay angamba tetika tsara iray hampiasako iray satria efa nahazo toerana ambony aho amin'ity fe-potoana ity.
Fa maninona ny Meta Description no manakiana ny paikadim-pitadiavana voajanahary?
Search Engine - ny motera fikarohana dia te hanome ny mpampiasa azy traikefa ambony sy valin'ny fikarohana kalitao avo indrindra. Vokatr'izany dia kritika ny famaritanao ny meta! Raha mampiroborobo tsara ny atiny ao anatin'ny famaritana meta ianao, mitaona ny mpampiasa motera hikaroka ny pejinao, ary tazomy eo… Ny motera fikarohana dia matoky kokoa ny laharanao ary mety hampiakatra ny laharanao aza raha toa ka misy pejy avo lenta ambony miteraka ny fisokafan'ny mpampiasa .
Search Users - ny pejy valin'ny motera fikarohana misy lahatsoratra tsy misy fotony tafiditra ao anatin'ny atin'ny pejy dia mety tsy hitaona ny mpampiasa motera hikaroka ao amin'ny pejinao. Na, raha tsy misy ifandraisany amin'ny atin'ny pejy ny famaritana anao, dia mety hiditra amin'ny fidirana SERP manaraka izy ireo.
Ny fanatsarana ny famaritana meta dia tena lafiny manan-danja amin'ny SEO eo amin'ny pejy noho ny antony vitsivitsy:
Votoatin'ny duplicate - Ny famaritana meta dia ampiasaina amin'ny famaritana raha manana ianao na tsia duplicate content ao anatin'ny tranokalanao. Raha mino i Google fa manana pejy roa misy atiny mitovy sy famaritana meta mitovy ianao, dia azo inoana fa izy ireo no manome ny laharana pejy tsara indrindra ary tsy hiraharaha ny ambiny. Ny fampiasana ny famaritana meta tsy manam-paharoa amin'ny pejy rehetra dia hiantohana ny pejy tsy ho voadona sy tapa-kevitra ny hamorona atiny mitovy dika aminy.
Keywords - Mandritra Keywords ampiasaina amin'ny famaritana meta aza misy fiantraikany mivantana amin'ny filaharan'ny pejinao fa misy izany sahy amin'ny valin'ny fikarohana, manintona ny sasany ny valiny.
Taham-pivoarana - Ny famaritana meta dia manakiana ny fanovana mpampiasa motera fikarohana ho mpitsidika ny tranokalanao. Miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay mba hahazoana antoka fa tena mahasarika ny mpampiasa motera ny famaritana azy ireo, miaraka amin'ny fampiasana ny teny lakile ho fifantohana faharoa. Mitovy amin'ny anjaranao ny mitondra olona handray andraikitra.
Torohevitra hanatsarana ny famaritana Meta:
fohy dia manakiana. Miakatra ny fitadiavana finday, manandrama manalavitra ireo famaritana meta izay mihoatra ny litera 120 ny halavany.
Aza famaritana meta duplicate manerana ny tranokalanao. Ny famaritana meta rehetra dia tsy maintsy samy hafa, raha tsy izany dia mety tsy hiraharaha azy ny motera fikarohana.
Ampiasao ny fehezanteny izay mahatonga ny mpamaky hahafanta-javatra na izay mibaiko ny fihetsik'izy ireo. Ny tanjona eto dia ny handroahana ilay olona hitety ny pejinao.
Sorohy ny linkbait famaritana meta. Ny manelingelina ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny famporisihana azy ireo hiditra sy tsy hahita ny fampahalalana notantarainao dia fomba fanao mahatsiravina izay hanimba ny fahafahanao mampiditra sy mamadika ireo mpitsidika ny motera fikarohana.
raha teny fanalahidy Tsy hanampy mivantana ny laharanao, fa hanampy ny tahan'ny tsindry bokotrao izy ireo satria misongadina ny teny fanalahidy rehefa mamaky ny valiny ny mpampiasa motera fikarohana. Miezaha mampiasa ny teny fanalahidy akaikin'ny teny voalohany ao amin'ny meta description.
Monitor na ny laharanao na ny tsindry bokinao isa… ary ampifanaraho ny famaritanao ireo meta mba hampitomboana ny fifamoivoizana sy ny fiovam-po mifandraika! Andramo ny fitsapana A / B izay manavao ny famaritanao ny meta mandritra ny iray volana ary hahitana raha afaka mampitombo ny fiovam-po ianao.
Ny rafitra fitantanana atiny sy ny famaritana Meta anao
Na mampiasa Squarespace, WordPress, Drupal, na hafa ianao CMS, alao antoka fa afaka manova ny famaritanao ny meta izy ireo. Amin'ny ankabeazan'ireo sehatra dia tsy dia miharihary ny sahan'ny famaritana meta ka mety hitady azy ianao. Ho an'ny WordPress, Laharana Math is our fangatahana ary manome ny mpampiasa topi-maso tsara momba ny famaritana meta araka ny fahita amin'ny birao na finday.
Isaky ny mamoaka pejy ianao na maniry ny hanatsara azy, dia hampihatra tanteraka ny fanatsarana ny famaritana meta ao anatin'ny dingana aho mba hampitomboana ny tahan'ny kitihinao ary hitondra ireo mpampiasa motera fikarohana lehibe mankany amin'ny orinasanao.
Tags: affiliate linktahan'ny click-throughduplicate contenthafiriana ny famaritana metafiry ny endri-tsoratra dia famaritana metafampiasana teny lakileteny fanalahidymeta descriptionhalavan'ny famaritana metafamaritana metameta Keywordserptoro-hevitra amin'ny fanatsarana ny famaritana meta
Aug 14, 2010 amin'ny 8: 57 AM
Soso-kevitra lehibe. Ny iray amin'ireo fitaovana tiako indrindra ho an'ny WordPress All-in-One SEO dia mamela antsika hamorona tiltes sy famaritana pejy tsotra nefa tsy mila mahafantatra betsaka momba ny kaody. ( Teny an-dalana, nampiditra anay tamin'ny All-in-One ianao ) koa misaotra amin'ny lafiny roa.
Aug 14, 2010 amin'ny 11: 23 AM
Lorraine, AIOS ary Google XML Sitemaps no 'tsy maintsy ananako' roa ho an'ny tranokala WordPress rehetra. Gaga aho fa tsy nampidirin'ny WordPress ho ao anatin'ny kaody fototra amin'izao fotoana izao. WordPress ihany no mahazo anao eo amin'ny 75% eo…. ireo plugins ireo dia manome fahafahana tanteraka ny sehatrao!
May 17, 2013 ao amin'ny 2: 41 PM
Lahatsoratra mahafinaritra toy ny mahazatra! Vao avy niresaka momba izany aho tamin'ny fiandohan'ny herinandro niaraka tamin'ny ekipa. Misaotra Doug.
May 17, 2013 ao amin'ny 2: 44 PM
Misaotra @jrdorkin:disqus !
May 18, 2017 ao amin'ny 6: 35 PM
Ho gaga tanteraka aho raha mahita olona matotra amin'ny fampiroboroboana ny atiny amin'ny tranokala tsy manana famaritana meta. Rehefa miara-miasa amin'ny olona aho dia lazaiko azy ireo fa ny famaritana meta dia ny vatan'ny doka voasokajy ao amin'ny Google. Hanandrana hivarotra zavatra ao amin'ny gazetinao ve ianao raha tsy misy famaritana ny entana? Tsia mazava ho azy!
May 19, 2017 amin'ny 8: 29 AM
Tsara hoy izy!